ရွှေပြည်သာတံတားအဆင်း၌ ယာဉ်နှစ်စီးတိုက်မိပြီး ၉ ဦးသေဆုံးဆိုခြင်းမှာ မဟုတ်မှန်၊ ဒဏ်ရာရရှိသူသာရှိဟု ဆို | Akonthi
ရွှေပြည်သာတံတားအဆင်းတွင် ယာဉ်နှစ်စီးတိုက်မှု ၉ ဦးသေဆုံးသည်ဆိုခြင်းမှာမဟုတ်မှန်ဘဲ ဒဏ်ရာရရှိသူများသာ ရှိခဲ့ကြောင်း အမှတ်(၉)ယာဉ်ထိန်းရဲဒုတပ်ဖွဲ့ခွဲမှူးရုံး(ရန်ကုန်-မြောက်)မှ သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရွှေပြည်သာတံတားအဆင်းတွင် မေလ ၁၈ ရက်၊ ည နေ ၆ နာရီခန့်က လှိုင်သာယာဘက်မှ တညင်းကုန်းလမ်းဆုံဘက်သို့ မောင်းနှင်လာသော အုတ်၊သဲ၊ကျောက် တင်ဆောင်သည့် YGN-9X/…… ဒေါင်ဖန်းအနီရောင်ယာဉ် ၎င်းရှေ့မှယာဉ်ကိုကျော်တက်စဉ် တစ်ဖက် ယာဉ်ကြောသို့ ရောက်ရှိသွားပြီး မျက်နှာချင်းဆိုင်မှ မောင်းနှင်လာသည့် YGN-4K/…. ကန်နာ အဖြူရောင်ယာဉ်ကို ဝင်တိုက်ခဲ့ကြောင်း အမှတ်(၉)ယာဉ်ထိန်းရဲဒုတပ်ဖွဲ့ခွဲမှူးရုံး(ရန်ကုန်-မြောက်)မှ သိရသည်။
“အတိုက်ခံရတဲ့ကားက Facebook ပေါ်မှာ ရေးနေ၊ ပြောနေကြသလို ဘုရားဖူးယာဉ်တော့မဟုတ်ဘူး။ ရေသန့်စက်ရုံကကားပါ။ ကဆုန်လပြည့်နေ့ဆိုတော့ ဘုရားတော့သွားချင်သွားကြမှာပေါ့။ အဲဒါကို ဘုရားဖူးယာဉ်လို့တော့ ပြောလို့မရဘူးပေါ့။ လူတော့မသေပါဘူး။ စိုးရိမ်ရတာတော့ ၃ ယောက်ပါတယ်။ အခုထိတော့ ဘာမှမဖြစ်သေးဘူး” ဟု အမှတ်(၉)ယာဉ်ထိန်းရဲဒုတပ်ဖွဲ့ခွဲမှူးရုံး(ရန်ကုန်-မြောက်)မှ ယာဉ်မှုစစ်ရဲအုပ်ဝင်းနိုင်က အကုန်သိသတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
အဆိုပါယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် YGN-4K/…. ကန်နာအဖြူရောင်ယာဉ်ပေါ်မှ ယာဉ်မောင်းအပါအဝင် အမျိုးသား ၉ ဦးနှင့် အမျိုးသမီး ၄ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သဖြင့် အင်းစိန်ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ထားကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ YGN-9X/…… ဒေါင်ဖန်းအနီရောင်ယာဉ်မောင်းဖြစ်သူ(စုံစမ်းဆဲ)ကို ယာဉ်မှုစစ် ရဲအုပ်ဝင်းနိုင်မှ တရားလိုပြုလုပ်၍ တိုင်တန်းခဲ့ရာ အင်းစိန်မြို့မရဲစခန်း၌ ယာဉ်(ပ)၅၀/၂၀၁၉၊ ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ-၃၃၈၊၂၇၉၊၂၀၂ ဖြင့် အမှုဖွင့်စုံစမ်းနေကြောင်း သိရသည်။
- နိုင်မင်းလွင်(အကုန်သိသတင်းဌာန) | ဓာတ်ပုံ-Ko Nan Wintun
ရှပွေညျသာတံတားအဆငျးတှငျ ယာဉျနှဈစီးတိုကျမှု ၉ ဦးသဆေုံးသညျဆိုခွငျးမှာမဟုတျမှနျဘဲ ဒဏျရာရရှိသူမြားသာ ရှိခဲ့ကွောငျး အမှတျ(၉)ယာဉျထိနျးရဲဒုတပျဖှဲ့ခှဲမှူးရုံး(ရနျကုနျ-မွောကျ)မှ သိရသညျ။
ဖွဈစဉျမှာ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး၊ အငျးစိနျမွို့နယျ၊ ရှပွေညျသာတံတားအဆငျးတှငျ မလေ ၁၈ ရကျ၊ ည နေ ၆ နာရီခနျ့က လှိုငျသာယာဘကျမှ တညငျးကုနျးလမျးဆုံဘကျသို့ မောငျးနှငျလာသော အုတျ၊သဲ၊ကြောကျ တငျဆောငျသညျ့ YGN-9X/…… ဒေါငျဖနျးအနီရောငျယာဉျ ၎င်းငျးရှမှေ့ယာဉျကိုကြျောတကျစဉျ တဈဖကျ ယာဉျကွောသို့ ရောကျရှိသှားပွီး မကျြနှာခငျြးဆိုငျမှ မောငျးနှငျလာသညျ့ YGN-4K/…. ကနျနာ အဖွူရောငျယာဉျကို ဝငျတိုကျခဲ့ကွောငျး အမှတျ(၉)ယာဉျထိနျးရဲဒုတပျဖှဲ့ခှဲမှူးရုံး(ရနျကုနျ-မွောကျ)မှ သိရသညျ။
“အတိုကျခံရတဲ့ကားက Facebook ပျေါမှာ ရေးနေ၊ ပွောနကွေသလို ဘုရားဖူးယာဉျတော့မဟုတျဘူး။ ရသေနျ့စကျရုံကကားပါ။ ကဆုနျလပွညျ့နဆေို့တော့ ဘုရားတော့သှားခငျြသှားကွမှာပေါ့။ အဲဒါကို ဘုရားဖူးယာဉျလို့တော့ ပွောလို့မရဘူးပေါ့။ လူတော့မသပေါဘူး။ စိုးရိမျရတာတော့ ၃ ယောကျပါတယျ။ အခုထိတော့ ဘာမှမဖွဈသေးဘူး” ဟု အမှတျ(၉)ယာဉျထိနျးရဲဒုတပျဖှဲ့ခှဲမှူးရုံး(ရနျကုနျ-မွောကျ)မှ ယာဉျမှုစဈရဲအုပျဝငျးနိုငျက အကုနျသိသတငျးဌာနသို့ ပွောသညျ။
အဆိုပါယာဉျတိုကျမှုကွောငျ့ YGN-4K/…. ကနျနာအဖွူရောငျယာဉျပျေါမှ ယာဉျမောငျးအပါအဝငျ အမြိုးသား ၉ ဦးနှငျ့ အမြိုးသမီး ၄ ဦး ဒဏျရာရရှိခဲ့သဖွငျ့ အငျးစိနျဆေးရုံသို့ ပို့ဆောငျထားကွောငျး သိရသညျ။
အဆိုပါဖွဈစဉျနှငျ့ပတျသကျ၍ YGN-9X/…… ဒေါငျဖနျးအနီရောငျယာဉျမောငျးဖွဈသူ(စုံစမျးဆဲ)ကို ယာဉျမှုစဈ ရဲအုပျဝငျးနိုငျမှ တရားလိုပွုလုပျ၍ တိုငျတနျးခဲ့ရာ အငျးစိနျမွို့မရဲစခနျး၌ ယာဉျ(ပ)၅၀/၂၀၁၉၊ ရာဇသတျကွီး ပုဒျမ-၃၃၈၊၂၇၉၊၂၀၂ ဖွငျ့ အမှုဖှငျ့စုံစမျးနကွေောငျး သိရသညျ။
- နိုငျမငျးလှငျ(အကုနျသိသတငျးဌာန) | ဓာတျပုံ-Ko Nan Wintun